သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Mugla မိုဘိုင်းအတွက်မဟုတ်တော့ဖြစ်ပါသည် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ48 Muglaသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Mugla မိုဘိုင်းထဲတွင်မရှိတော့ပါ
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 48 Mugla, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မိုဘိုင်း app ကိုအတူဘတ်စ်ကားကဒ်ထဲကမိုဘိုင်းနိုင်ငံသားများစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖြစ်ပြီးနောက် 'Mugla စီးတီးကဒ်' 'စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Muğlaမြူနီစီပယ်, ဘတ်စ်ကားကဒ်အရောင်းအ, ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းမြေပုံ, ဒါMuğla '' Mugla စီးတီးကတ် '၌အကြောင်းအရာတွေအများကြီးဘဝမှမိုဘိုင်း application ကိုသုံးစွဲရှိရာပေါ်ပြူလာနေရာများကိုကြေညာ။ Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကနေကြေငြာချက်၌, နိုင်ငံသားများဝင်ရောက်သည့်ဖြစ်စဉ်ကိုမိုဘိုင်း app ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောစေမယ်လို့ပြီးနောက်စမတ်ဖုန်းကို '' Mugla စီးတီးကဒ် '' သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြောင်းကိုအများအပြားကိစ္စများအကြိုးပွုနိုငျ install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘဝက "ကြေညာချက်ဂျီပီအက်စ်နှင့်အတူသင်ယူနိုင်မည့်ရပ်တန့်ဖို့အချိန်ဇယား, ယာဉ်လမ်းကြောင်းများနှင့်ဆိုက်ရောက်အချိန်များကိုဆိုလိုသည်မိုဘိုင်း applications များ (Mugla မြို့ပြန်ဆောင်မှုများ) နှင့်နိုင်ငံသားများ၏MUTTAŞနှင့် Ott (ပုဂ္ဂလိကပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) လွန်ကလူကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းစဉ်းစားအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလျှောက်လွှာအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကိုပြင်ဆင် ကိစ္စတွင်အသုံးပြုထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပြင်ဆင်ကြ၏။ Applications ကိုနိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်. အလွယ်တကူအပေါငျးတို့သမှတ်တိုင်များနှင့်ခေတ္တဖော်ပြရန်ရနိုင်ရာအရပ်အနီးတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အလေ့အကျင့်တှငျအဘယျအနာဂတျမှာအချိန်ရှိရာမျှော်မှန်းထားငွေပမာဏကိုဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်, ထိုကဲ့သို့သောဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်အများအပြားနောက်ကွယ်မှဖြစ်၏။ "
"ဒီ application ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသုံးနိုင်တယ်"
အဆိုပါကြေညာချက်များ menu ကဘတ်စ်ကားများနှင့်ကြေညာချက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံသားများ၏လက်ငင်းအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူလက်တွေ့တွင်ဤထင်မြင်ယူဆချက်ပေးထားကြသည် ဟူ. ၎င်း,
မိုဘိုင်း application များ6ထဲမှာ "Mugla စီးတီး Card ကိုသီးခြား menus တွေရှိပါတယ်။ ဤအရာတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြား menu ကိုအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား menus တွေနိုင်ငံသားများဆန္ဒနှင့်အကြံပြုချက်များပစ္စုပ္ပန်ကိုပေးပို့နေကြသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်ကိုနေကြသည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်မှလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်အတွက်အဆင်ပြေဖြစ်အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကို enabled ပြုလုပ်လျှင်မသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများအဖြစ်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်း '' မသန်စွမ်းသူ access ကို '' ကိုအလွယ်တကူလျှောက်လွှာကိုအသုံးနိုင်ပါလိမ့်မည် "ဟုကြေညာချက်ကဆိုသည်။
မိုဘိုင်းအတွက်အခုဆိုရင် Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာ 26 / 02 / 2015 Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကအခုဆိုရင်မိုဘိုင်း: Erciyes ဆောင်းရာသီနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာ, iOS နဲ့ Android-based မိုဘိုင်းဖုန်းများယခုစမတ်ဖုန်းကနေနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ်။ မိမိအအစီအစဉ်၏ Erciyes Inc က '' Erciyes မိုဘိုင်း '' တင်ဆက်မှုကပြင်ဆင်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကြ၏။ အမှန်တကယ်အစည်းအဝေးတွင်မြို့တော်မြူနီစီပယ်စည်းဝေးပွဲခန်းမ, program ကို Erciyes ကနေဧည့်သည်များဖြစ်လိုသူမည်သူမဆိုအဓိကအားယနေ့စတင်ခြင်း ", ထို 15 ကွဲပြားခြားနားသော menu ကိုမိုဘိုင်း Erciyes ဖျော, Erciyes Inc ကိုအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Manager ကို Akif စတက်လွင်ပြင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေး, သတင်းအချက်အလက်ပရမ်းပတာမပါဘဲ , ဝန်ဆောင်မှုသို့သူတို့အတွက်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ။ 15 မိုဘိုင်း Erciyes ရဖို့အဆင်ပြေလမ်းကွဲပြားခြားနားသော menus တွေရှိပါတယ်။ ဒီခွင့်ပြု ...
Las Vegas မှာစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့်အတူ Comfortable ရယူခြင်း 18 / 11 / 2017 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်အတူ Las Vegas မှာ " 'သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ေူပာင်းလဲရေးကိုအနိုင်ရMuğlaမြူနီစီပယ်၏အောင်မြင်မှုပိုအဆင်ပြေဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံသားများနှစ်တွင်စတင်အထူးလူမျိုး၏ကော်ပိုရိတ်နားလည်မှုကစီမံခန့်ခွဲအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပိုမိုအဆင်ပြေချွေနှင့်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု oriented ယာဉ်များဖြစ်ကြသည် 2015 ဘတ်စ်ကား၏ပြောင်းလဲခြင်း Mugla မြူနီစီပယ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး2နှစ်အတွင်းအသွင်ပြောင်းစီမံကိနျး၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာပြည်နယ်ဒါxnumx'lükနှုန်းထားများအနှံ့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်, လေအေးပေးစက်, ကင်မရာအသံဖမ်းစနစ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတအင်ဂျင်အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ tools တွေကိုMuğlaပြန်လည်စီးနင်းခွင့်ပြုရန်, အသက်၏ညာဘက် 93 နှစ်အခမဲ့ခရီးသွားနေစဉ်တွင်, အာဇာနည် '' ဆွေမျိုးသားချင်းများ, စစ်ပြန်များနှင့်အခြားနိုင်ငံသားများမသန်စွမ်း, ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားမှ ...
ပိုများသော9Transit လိုင်း Las Vegas မှာကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ 02 / 06 / 2018 Mugla ၏ပြည်နယ်တစ်လျှောက်လုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအားလုံးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်Muğlaမြူနီစီပယ် ပို. ပင်န်ဆောင်မှု9မှစတင်ခဲ့သည်။ လျှော့စျေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဥပဒေအမှတ် 4736 ၏နယ်ပယ်သည်အဖြစ်Muğlaမြူနီစီပယ်, ပုဂ္ဂလိကပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (Otte), Bodrum ၏မြို့မှာMuğlaမြူနီစီပယ်ကိရိယာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှု; Turgutreis - Bahçelievler (Ring ကို), အိုး - Bodrum နှင့်အိုး -3လိုင်းအပါအဝင် Mila, သင် B ကိုခရိုင်အတွင်းရှိတူး - Yata, Kafacakaplancık - အိပ်ရာနှင့်Esenköy - ထို hinge ခရိုင်အတွင်းရှိ B ကိုလိုင်းနှင့်မုဆိုးအပါအဝင်3- hinge (Fadil, Murat, ပေါ့ပါးYaylasöğütများမှာ ) Bozyer - ပတ္တာ ...
Muğlaရဲ့သန့်ရှင်းကမ်းခြေ Project မှအပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင် Protected နှင့်အတူအပြာရောင်ပင်လယ် 17 / 06 / 2019 Muğlaမြူနီစီပယ်အပြာရောင်ပင်လယ်ပြင် Coastal သန့်ရှင်း 4530 စက်လှေအစေခံစီမံကိန်းအတူတက်ယနေ့အထိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကတူရကီအတွက်ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာပထမဦးဆုံးနှင့် Mugla ၏ကမ်းခြေနှင့်အတူ Mugla မြူနီစီပယ်သန့်ရှင်းကမ်းခြေ Project မှအပြာရောင်ပင်လယ်ပြင်အားဖြင့်သရဖူဆောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆု, အပြာနှင့်အစိမ်းရောင်ကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်။ 1480 လှေနှင့်အတူအရှည်ဆုံးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသည့် Las Vegas မှာတူရကီတို့ကပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း6ကီလိုမီတာ, Muğlaမြူနီစီပယ်ယနေ့ 4530 597 လှေတက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်အပြာရောင်ကဒ်ပေးအပ်ထားပါတယ်အဏ္ဏဝါရေယာဉ်များအနေဖြင့်စွန့်ပစ်စုဆောင်း။ Gocek နှင့် 4530 3977 လှေထဲမှာ Akyaka Muğlaမြူနီစီပယ်နှစ်ခုစွန့်ပစ်ဧည့်ခံစင်တာရှိပါတယ် ...
အတူလယ်သမားဘေးတွင်TürkTraktörနယူးစမတ်စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့် '' ဖျော်ဖြေမှုအကြှနျုပျ၏ဆဲလ် '' 09 / 05 / 2019 အဖွဲ့အစည်း၏ 65 ။ ယင်း၏TürkTraktörကဏ္ဍကိုဂုဏ်ပြုသောနောက်တဖန်ငါ၏အလယ်ပြင်၌စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်အကြံဉာဏ်ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးသည့်ပထမဆုံးလယ်သမားတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည် CEPT စျေးကွက်အသစ်ကမိုဘိုင်း application များပေးထားပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ် 12 နှစ်ပေါင်းTürkTraktörခေါင်းဆောင်ခေတ်သစ်စိုက်ပျိုးရေးဖို့ညှနျကွားခပေးရသောဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသုံးပြုသူဖော်ရွေဒစ်ဂျစ်တယ် Application "မိုဘိုင်းငါ၏ဖျော်ဖြေမှု" ဟုအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းသောအရာနည်းပညာအသုံးပြုမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ခံမှုစိုက်ပျိုးရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ TürkTraktörအသစ်သော applications များနှင့်အတူလယ်သမားများအားစိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုတိုးတက်လာဖို့အကွံဉာဏျပေးနဲ့သူတို့အဘို့အ ADDED တန်ဖိုးကိုပေးရည်ရွယ်သည်။ မိုဘိုင်း access ကိုလယ်သမားများ၏ဖျော်ဖြေမှုမိုဘိုင်းကွင်းဆင်း applications များပေါ်တွင်ပလီကေးရှင်းအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအသိဉာဏ်မိုဘိုင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည် ...
Mugla စီးတီး Card ကို
Mugla စီးတီးကတ်မိုဘိုင်း app
Las Vegas မှာစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့်အတူ Comfortable ရယူခြင်း
ပိုများသော9Transit လိုင်း Las Vegas မှာကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ
အတူလယ်သမားဘေးတွင်TürkTraktörနယူးစမတ်စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့် '' ဖျော်ဖြေမှုအကြှနျုပျ၏ဆဲလ် ''
အသစ်က cableway လမ်း Cable ကိုမော်တော်ကားပို့ဆောင်ရေးပိုလွယ်နှင့်အတူ
အသစ်က mobility ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်ယခုတစ်မြို့အစ္စတန်ဘူလ်ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်